सुबिसुको क्लियर टिभी चलेन ? यसो गर्नुहोस् - Tech News Nepal Tech News Nepal
सुबिसुको क्लियर टिभी चलेन ? यसो गर्नुहोस्
काठमाडौं । सुबिसुको आईपी टिभी सेवा क्लियर टिभिमा कतिपय प्रयोगकर्ताले टेलिभिजन च्यानलहरु हेर्न पाइरहेका छैनन् । आज हामी नयाँ अपडेटसँगै क्लियर टिभीमा देखिएको यस किसिमको समस्या आफैं कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा बताउँदै छौं ।
सुरुमा क्लियर टिभीको सेट टप बक्सको पछाडि भागमा रहेको पावर बटन अफ राख्नुहोस् । अब अगाडि भागमा दिइएको स्ट्याण्डबाई बटन दबाएर त्यससँगै पछाडि भागमा रहेको पावर बटन अन गर्नुहोस् ।
तर याद राख्नुहोस् यस क्रममा स्ट्याण्डबाई बटनमा भने लगातार रुपमा दबाइरहनुहोस् । यससँगै तपाईंले सेट टप बक्सको अगाडि भागमा रहेको डिस्प्लेमा बूट लेखिएको देख्नुहुनेछ ।
त्यसको केही बेरमा बक्सको डिस्प्लेमा लोड लेखिएको देख्नुहुनेछ । अब भने स्ट्याण्डबाई बटन छोड्नुहोस् ।
यति गरिसकेपछि तपाईंले टेलिभिजन स्क्रिनमा म्यानुअल अपग्रेड देख्न सक्नुहुनेछ । त्यसमा फ्रिक्वेन्सी अगाडि लेखिएको ६१० मा रिमोटबाट क्लिक गर्नुहोस् र त्यसलाई ३०६ बनाउनुहोस् अनि ओके बटन थिच्नुहोस् ।
त्यसैगरी अब च्यानल बटन थिच्दै तल आउनुहोस् र पीआईडी अगाडि रहेको ८००० लाई परिवर्तन गरेर ८००१ बनाउनुहोस् अनि ओके आटन थिच्नुहोस् ।
यस्तै अटो डाउनलोड अगाडि नो लेखिएको स्थानमा गएर भोलुम बटन दबाएर एस बनाउनुहोस् र अन्तिममा रहेको स्टार्ट बटनमा गएर ओके थिच्नुहोस् । अब तपाईंको सिस्टम अपग्रेड हुन थाल्नेछ ।
डाउनलोड र बर्न दुवै १०० प्रतिशत पुगिसकेपछि तपाईंको क्लियर टिभी पहिले जस्तै पुनः सञ्चालनमा आउनेछ । यदि अघिको बूट लेखिए पश्चात लोड देखिएन भने त्यसको समाधानका लागि चाहिँ तपाईंले सुबिसुको सर्भिस सेन्टरमै सम्पर्क राख्नुपर्ने हुन्छ ।
यी हुन् नेपालमा इन्टरनेट महँगो हुनुको कारण, कसरी घटाउने शुल्क ?
काठमाडौं । इन्टरनेट अत्यावश्यक आवश्यकता भइसकेको छ । दैनिकी इन्टरनेटसँग जोडिँदै गएको विषयलाई आत्मसाथ गर्दै
सुबिसुको ‘दक्षिणा अफर’, सस्तो प्याकेजसँगै अनलाइन भुक्तानीमा १००० क्यासब्याक
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेट लिमिटेडले बडा दशैँको उपलक्ष्यमा ‘दक्षिणा अफर’ सार्वजनिक गरेको
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट परियोजनाको म्याद थप नगरेको भन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी सुबिसुलाई
सुबिसुले ल्यायो नेपालकै फास्ट १५० एमबीपीएसको इन्टरनेट, कति होला मूल्य ?
काठमाडौं । सुबिसु केबल नेट प्रालिले नेपालकै सबैभन्दा फास्ट इन्टरनेट प्याकेज सुरु गरेको छ ।